Dalxiis warshad - shandong Gaoqiang Waxyaabaha Cusub ee Teknolojiyada Co., Ltd.
shandong Gaoqiang Waxyaabaha Cusub ee Teknolojiyada Co., Ltd. wuxuu ku yaal caasimadda saadka ee Linyi City, waqooyiga Shiinaha. Shirkaddu waxay ku takhasustay cilmi-baarista iyo horumarinta iyo soo-saarka, ka shaqeynta iyo iibinta wax-soo-saarka xirfadeed ee qaan-gaarka la taaban karo.
Shandong Gaoqiang Waxyaabaha Cusub ee Teknolojiyada Co., Ltd. waxay ku saabsan tahay aag 14 mu ah, oo leh 9100 mitir murabac ah oo loogu talagalay dhismaha iyo 600 mitir murabac oo loogu talagalay cilmi baarista sayniska iyo shaybaarka. Shirkaddayadu waxay dhistay khadka waxsoosaarka shaybaarka dhammaystiran, falanqaynta kiimikada iyo shaybaarka hantida jireed ee lala leeyahay Jaamacadda Shandong ee Dhismaha iyo Jaamacadda Beijing ee cilmiga injineernimada, oo ku qalabaysan qalab casri ah oo lagu cabbiro laguna tijaabiyo aaladaha iyo qalabka ballaaran.
Shirkaddayadu waxay leedahay koox cilmi baaris iyo horumarineed oo ka kooban dhakhaatiir xirfad leh, sayidyahanno ka tirsan Shandong University of Building. Waxyaabaha ugu muhiimsan waa Polycarboxylate ku salaysan PCE Hooyo khamri, Superplasticizer Xisaab haynta,
Polycarboxylate oo ku saleysan Superplasticizer Qaboojinta Biyaha.
Shandong Gaoqiang Waxyaabaha Cusub ee Teknolojiyada Co., Ltd. had iyo jeer waxay u hoggaansamaan tayada sida aasaaska, hal-abuurnimada sida awoodda, waxayna ku dadaalaysaa inay hoggaamiso warshadaha qalabka. Daacadnimada shirkadeena, xooggeeda iyo tayada wax soo saarkuba waxay helaan aqbalida warshadaha Maamulaha guud iyo dhamaan shaqaalaha shirkada way soo dhawaynayaan asxaabta
laga soo bilaabo dhammaan qaybaha nolosha si ay u booqdaan, hagista iyo gorgortanka ganacsiga.
Bandhigga Aagga Warshadaha